ဒီကစားသမားစာရင်းက ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ ကိုက်ညီမယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားများ အပိုင်း(၂)
2 Nov 2018 . 2:33 PM
အခုနောက်ပိုင်း မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ ရေစီးကြောင်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေထက် အရည်အသွေးမြင့် လူငယ်ကစားသမားတွေက နေရာပိုယူလာကြတယ်။ ရာသီတိုင်းမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ လူငယ်ကစားသမားတွေ အမြဲလိုလိုထွက်ပေါ်လေ့ရှိပြီး ဥရောပထိပ်သီးအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေအတွက် ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုတာက ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုပါပဲ။ ဒီရာသီ ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်တွေမှာ နေရာအလိုက် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ အသက်(၂၃)နှစ်အောက် ကစားသမားတွေကို နာမည်ကြီး sportskeeda.com က ရွေးချယ်ခဲ့တာကို Akhayar Sports ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် အပိုင်း(၂)အဖြစ် ဆက်လက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် .
ကွင်းလယ် – ရိုဒရီဂိုဟာနန်ဒက်ဇ် Rodrigo Hernández (အက်သလက်တီကို)
အသက် (၂၂)နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ စပိန်လူငယ်ကွင်းလယ်လူ ရိုဒရီဂိုဟာ အက်သလက်တီကိုအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် အဓိက ထိန်းညှိပေးနေတဲ့ ကစားသမားပါ။ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ တိုက်စစ်ကို တားဆီးတဲ့နေရာမှာသာမက Passing ပိုင်းမှာလည်း သူမတူအောင် ထူးချွန်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ ဘူးစကွက်စ် Sergio Busquets နဲ့ ကစားပုံ တူတယ်လို့ မီဒီယာတွေရဲ့ ချီးကျူးခြင်းကို ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။
ကွင်းလယ် – အာသာမယ်လို Arthur Melo (ဘာစီလိုနာ)
ဘရာဇီးလ်လူငယ် ကြယ်ပွင့် အာသာကိုလည်း ဒီစာရင်းမှာ မဖြစ်မနေထည့်သွင်းရမှာပါ။ ဒီရာသီမှာ သူ့ရဲ့ တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ဘောလုံးပေးပို့တဲ့အကြိမ်က (၈၈)ကြိမ်အထိရှိပြီး အောင်မြင်မှုနှုန်းက (၉၄.၈)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိတယ်။ အင်နီယေစတာ Iniesta – ဇာဗီ Xavi မရှိတော့တဲ့ ဘာစီလိုနာကွင်းလယ်ကို အကောင်းဆုံး ထိန်းကြောင်းပေးနေတဲ့သူလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွင်းလယ် – ဟူဆန်အော်ယာ Houssem Aouar (လိုင်ယွန်)
ကွင်းလယ် တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့် ဟူဆန်အော်ယာဟာ ခံစစ်ကို လိုက်ပါကစားနိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည် ကောင်းမွန်သူ၊ Final Passing နဲ့ အကွက်မြင်မြင် ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Creative Player တစ်ဦးပါပဲ။ ဒီရာသီမှာ လိုင်ယွန်အသင်းအတွက် (၂)ဂိုးသွင်း၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၂)ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုက (၂.၅)ကြိမ်၊ ပျမ်းမျှ ဂိုးဖန်တီးမှု (၁.၁)ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားသူပါ။
ကွင်းလယ် – ပူလီရှစ် Christian Pulisic (ဒေါ့မွန်)
အသက် (၂၀)သာ ရှိသေးပေမယ့် ပူလီရှစ်ဟာ ဒေ့ါမွန်အသင်းရဲ့ ဘယ်တောင်ပံနေရာကို အပိုင်သိမ်းပိုက်ထားပြီး အခုဆိုရင် အသင်းအတွက် ပွဲ(၁၀၀)ကျော် ကစားထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးမျိုးဆက် ပြတ်သလိုဖြစ်နေတဲ့ အမေရိကန်အသင်းအတွက် အားထားရတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါပဲ။ မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ တောင်ပံကစားသမားတစ်ဦးဟာ Speed ကောင်းရုံ၊ ဂိုးဖန်တီးနိုင်ရုံနဲ့တင် မလုံလောက်တော့ဘဲ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကောင်းဖို့ လိုအပ်ပြီး ပူလီရှစ်က အဲဒီအရည်အသွေးတွေနဲ့ ကိုက်ညီသူလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
ရှေ့တန်း – မက်ဆီဂိုးမက်ဇ် Maxi Gomez (ဆယ်လ်တာဗီဂို)
အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ် ဥရုဂွေးလူငယ်ကြယ်ပွင့် တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီဂိုးမက်ဇ်အတွက် ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီက လာခြင်းကောင်းတဲ့ ရာသီတစ်ခုလို့ ဆိုရမယ်။ ဆယ်လ်တာဗီဂိုအသင်းအတွက် (၄)ဂိုးသွင်း၊ ဂိုးဖန်တီးမှု (၄)ကြိမ်လုပ်ထားပြီး တိုက်စစ်ကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်နေတဲ့သူပါပဲ။ ခွန်အားသုံး ကစားတတ်သူ၊ နိုင်လိုစိတ် ပြင်းထန်ပြီး Aggressive ဖြစ်တဲ့ ကစားဟန်ကြောင့် ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး ဆွာရက်ဇ် Luis Suarez နဲ့ ပုံစံတူတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။
ရှေ့တန်း – ဘာပေ Kylian Mbappe (PSG)
ဘာပေရဲ့ အရည်အသွေးကိုတော့ အထူး ချီးကျူးဖွဲ့နွှဲ့စရာ မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ လျင်မြန်တဲ့ ပြေးအား၊ Pace နဲ့ Intelligent Movement တွေ ကောင်းခဲ့အပြင် Skill ပါ ကောင်းမွန်တာကြောင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးလို့ ဆိုရမယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo – မက်ဆီ Messi ခေတ်လွန်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားနေရာကို တက်လှမ်းနိုင်မယ့်သူလို့ မီဒီယာတွေက သတ်မှတ်ထားကြတယ်။
ဒီကစားသမားတွေကတော့ အခုလက်ရှိ ရာသီမှာ သက်ဆိုင်ရာအသင်းတွေအတွက် ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ လူငယ်ကစားသမားတွေပါပဲ။ sportskeeda.com ရဲ့ ရွေးချယ်မှုအပေါ် ပရိသတ်တွေလည်း အမြင်တူလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . . .
ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားများ အပိုင်း(၁)
Photo:Getty Image,Diario AS,The18,europeansoccer,International Champions Cup,Twitter
ဒီရာသီမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမားမြား အပိုငျး(၂)
အခုနောကျပိုငျး မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာ ရစေီးကွောငျး ပွောငျးလဲလာခဲ့ပွီး နာမညျကွီး ကစားသမားတှထေကျ အရညျအသှေးမွငျ့ လူငယျကစားသမားတှကေ နရောပိုယူလာကွတယျ။ ရာသီတိုငျးမှာ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိတဲ့ လူငယျကစားသမားတှေ အမွဲလိုလိုထှကျပျေါလရှေိ့ပွီး ဥရောပထိပျသီးအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ လူငယျလေးတှအေတှကျ ပုံမှနျကစားခှငျ့ရဖို့ဆိုတာက ကွီးမားတဲ့ စိနျချေါမှုပါပဲ။ ဒီရာသီ ဥရောပထိပျသီးလိဂျတှမှော နရောအလိုကျ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ အသကျ(၂၃)နှဈအောကျ ကစားသမားတှကေို နာမညျကွီး sportskeeda.com က ရှေးခယျြခဲ့တာကို Akhayar Sports ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ အပိုငျး(၂)အဖွဈ ဆကျလကျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ .
ကှငျးလယျ – ရိုဒရီဂိုဟာနနျဒကျဇျ Rodrigo Hernández (အကျသလကျတီကို)
အသကျ (၂၂)နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ စပိနျလူငယျကှငျးလယျလူ ရိုဒရီဂိုဟာ အကျသလကျတီကိုအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျကို ဟနျခကျြညီအောငျ အဓိက ထိနျးညှိပေးနတေဲ့ ကစားသမားပါ။ ပွိုငျဘကျရဲ့ တိုကျစဈကို တားဆီးတဲ့နရောမှာသာမက Passing ပိုငျးမှာလညျး သူမတူအောငျ ထူးခြှနျသူလညျးဖွဈပါတယျ။ ဘာစီလိုနာ ကှငျးလယျလူ ဘူးစကှကျဈ Sergio Busquets နဲ့ ကစားပုံ တူတယျလို့ မီဒီယာတှရေဲ့ ခြီးကြူးခွငျးကို ခံထားရသူဖွဈပါတယျ။
ကှငျးလယျ – အာသာမယျလို Arthur Melo (ဘာစီလိုနာ)
ဘရာဇီးလျလူငယျ ကွယျပှငျ့ အာသာကိုလညျး ဒီစာရငျးမှာ မဖွဈမနထေညျ့သှငျးရမှာပါ။ ဒီရာသီမှာ သူ့ရဲ့ တဈပှဲပမျြးမြှ ဘောလုံးပေးပို့တဲ့အကွိမျက (၈၈)ကွိမျအထိရှိပွီး အောငျမွငျမှုနှုနျးက (၉၄.၈)ရာခိုငျနှုနျးအထိ ရှိတယျ။ အငျနီယစေတာ Iniesta – ဇာဗီ Xavi မရှိတော့တဲ့ ဘာစီလိုနာကှငျးလယျကို အကောငျးဆုံး ထိနျးကွောငျးပေးနတေဲ့သူလို့ ဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။
ကှငျးလယျ – ဟူဆနျအျောယာ Houssem Aouar (လိုငျယှနျ)
ကှငျးလယျ တိုကျစဈကစားသမားဖွဈပမေယျ့ ဟူဆနျအျောယာဟာ ခံစဈကို လိုကျပါကစားနိုငျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျ ကောငျးမှနျသူ၊ Final Passing နဲ့ အကှကျမွငျမွငျ ဖနျတီးပေးနိုငျတဲ့ Creative Player တဈဦးပါပဲ။ ဒီရာသီမှာ လိုငျယှနျအသငျးအတှကျ (၂)ဂိုးသှငျး၊ ဂိုးဖနျတီးမှု (၂)ကွိမျရှိခဲ့ပွီး တဈပှဲပမျြးမြှ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှုက (၂.၅)ကွိမျ၊ ပမျြးမြှ ဂိုးဖနျတီးမှု (၁.၁)ကွိမျအထိပွုလုပျထားသူပါ။
ကှငျးလယျ – ပူလီရှဈ Christian Pulisic (ဒေါ့မှနျ)
အသကျ (၂၀)သာ ရှိသေးပမေယျ့ ပူလီရှဈဟာ ဒေ့ါမှနျအသငျးရဲ့ ဘယျတောငျပံနရောကို အပိုငျသိမျးပိုကျထားပွီး အခုဆိုရငျ အသငျးအတှကျ ပှဲ(၁၀၀)ကြျော ကစားထားသူဖွဈပါတယျ။ ဘောလုံးမြိုးဆကျ ပွတျသလိုဖွဈနတေဲ့ အမရေိကနျအသငျးအတှကျ အားထားရတဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါပဲ။ မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာ တောငျပံကစားသမားတဈဦးဟာ Speed ကောငျးရုံ၊ ဂိုးဖနျတီးနိုငျရုံနဲ့တငျ မလုံလောကျတော့ဘဲ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျကောငျးဖို့ လိုအပျပွီး ပူလီရှဈက အဲဒီအရညျအသှေးတှနေဲ့ ကိုကျညီသူလို့ သတျမှတျရမှာပါ။
ရှတေ့နျး – မကျဆီဂိုးမကျဇျ Maxi Gomez (ဆယျလျတာဗီဂို)
အသကျ(၂၂)နှဈအရှယျ ဥရုဂှေးလူငယျကွယျပှငျ့ တိုကျစဈမှူး မကျဆီဂိုးမကျဇျအတှကျ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီက လာခွငျးကောငျးတဲ့ ရာသီတဈခုလို့ ဆိုရမယျ။ ဆယျလျတာဗီဂိုအသငျးအတှကျ (၄)ဂိုးသှငျး၊ ဂိုးဖနျတီးမှု (၄)ကွိမျလုပျထားပွီး တိုကျစဈကို အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျနတေဲ့သူပါပဲ။ ခှနျအားသုံး ကစားတတျသူ၊ နိုငျလိုစိတျ ပွငျးထနျပွီး Aggressive ဖွဈတဲ့ ကစားဟနျကွောငျ့ ဘာစီလိုနာတိုကျစဈမှူး ဆှာရကျဇျ Luis Suarez နဲ့ ပုံစံတူတယျလို့ သတျမှတျခံထားရသူပါ။
ရှတေ့နျး – ဘာပေ Kylian Mbappe (PSG)
ဘာပရေဲ့ အရညျအသှေးကိုတော့ အထူး ခြီးကြူးဖှဲ့နှဲ့စရာ မလိုလောကျဘူးထငျပါတယျ။ လငျြမွနျတဲ့ ပွေးအား၊ Pace နဲ့ Intelligent Movement တှေ ကောငျးခဲ့အပွငျ Skill ပါ ကောငျးမှနျတာကွောငျ့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ကစားသမားတဈဦးလို့ ဆိုရမယျ။ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo – မကျဆီ Messi ခတျေလှနျမှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမားနရောကို တကျလှမျးနိုငျမယျ့သူလို့ မီဒီယာတှကေ သတျမှတျထားကွတယျ။
ဒီကစားသမားတှကေတော့ အခုလကျရှိ ရာသီမှာ သကျဆိုငျရာအသငျးတှအေတှကျ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ လူငယျကစားသမားတှပေါပဲ။ sportskeeda.com ရဲ့ ရှေးခယျြမှုအပျေါ ပရိသတျတှလေညျး အမွငျတူလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ . . .
ဒီရာသီမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့ကစားသမားမြား အပိုငျး(၁)
by Ko Kyue . 60 mins ago